Homeसमाचारटिकटमा रुदै ‘फोटो फिरिममा’ गाउने ५ बर्षे नानी रचना रिमाललाई भेट्न आईन् , रचनाले उपहार दिईन् (भिडियो हे’र्नुहोस)
February 24, 2021 admin समाचार 6452
टिकटकमा रु’दै फोटो फिरिममा गाउने ५ बर्षकी राजज्ञ श्रेष्ठले फोटो फिरिममा टिकटक क’म्पिटिशन जितेकी छिन् । उनलाई गीतकी गायिका रचना रिमालले नगद रु १५००० र प्रमाण पत्र हस्ता’न्तरण गरिन् । उपहार जित्दा राजज्ञ खुशी हुँदै फोटो फि’रिममा सुनाईन् ।
शिशिर भण्डारीको शव्द तथा सँ’गीत रहेको गीतको फिमेल भर्सनका लागि टिकटक प्रतियो’गिता आयोजना गरिएको थियो । जसमा धेरैले सहभागिता जनाएका थिए । ५ बर्षकी रा’जज्ञको भिडियोले टिकटकमा ८० हजार भन्दा बढि ला’ईक पाउँदै उहार जित्न सफल भएको हो ।
गायिका रचना रिमालसँगको भेटमा टिकटक बना’उँदंदै राजज्ञले आफ्नो पनि भ’विष्यमा ठुलो गायिका बन्ने सपना रहेको बताईन् । यता रच’नाले पनि आफु सानै देखि गाउने गरेको अनु’भव सुनाईन् । ममिले छोडेर मामाघर गएपछि राजज्ञले रुदै फोटो फिरिममा गाए’की थिईन्, उनको बुवाले भने । भिडियो हेर्नुस – इताजा खबरबाट
May 1, 2021 admin समाचार 6582
सलमान खान र सोनाक्षीको बिहेको फोटो भाइरल ! के हो वास्तविकता जान्नुहोस ?
March 3, 2022 admin समाचार 1610
वलिवूड अभिनेता सलमान खान आजको समयमा सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीमा सायदै यस्तो कोही होलान् जस लाई यो नाम थाहा नहुनसक्छ । किनभने सलमान खानको सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीमा एक तर्फी नाम छ, जसका कारण आजको समयमा उनलाई
April 13, 2021 admin समाचार 5606